Ezinaụlọ akpụzi, Kitchenware akpụzi, Crate akpụzi - HEYA
Ọkọlọtọ dị elu
Heya akpụzi na-ekwusi ike n'ichepụta ihe dị elu na ọkwa dị elu nke plastik, nke dị mfe ịrụ ọrụ na ilekọta ndị ahịa.
Heya akpụzi nwere ike izute ahịa mkpa site oru oma mmejuputa iwu-nke onye ahaziri na onye-nkwụsị ebu ngwọta.
Heya akpụzi ga-azụlite na imepụta ngwaahịa na ebu dị ka arịrịọ ndị ahịa na-arịọ iji nyere ha aka ịchekwa ego nke ọrụ ọhụụ, mee ka azụmaahịa ha baa uru na nnukwu mkpụrụ.
Heya akpụzi adopts a dịgasị iche iche nke elu nhazi akụrụngwa, jikọtara na ọgaranya ahụmahụ na-eme plastic Ebu, ịgagharị ọzọ kwesịrị ekwesị na mụ ebu maka ndị ahịa.
Mkparịta ụka Projectlọ Ọrụ
Ele niile Ngwaahịa
HEYA ebu bụ ọkachamara na n'ichepụta plastik ebu karịrị afọ 10, dị ka ezinụlọ ebu, kichin ebu, ebu ngwa ngwa, ụlọ ọrụ na ọrụ ubi ebu na na on.We-amalite na-atụgharị ọ bụla obere kposara n'ụzọ kwesịrị ekwesị, na "ahịa afọ ojuju, adigide ọhụrụ, àgwà customization na -aga oge ọganihu ”dị ka isi uru, àjà ahịa elu mma plastic Ebu na onye-nkwụsị ebu ngwọta.